येति एयर्लाइन्सको मालिक अब को ? कस्ले सम्हाल्छ अब आङछिरिङको ५० अर्बको साम्राज्य ? यति ठूलो व्यवसाय कस्लाई जाला ? (भिडियो) — SuchanaKendra.Com
येति एयर्लाइन्सको मालिक अब को ? कस्ले सम्हाल्छ अब आङछिरिङको ५० अर्बको साम्राज्य ? यति ठूलो व्यवसाय कस्लाई जाला ? (भिडियो)
येति एयर्लाइन्सको मालिक अब को ? कस्ले सम्हाल्छ अब आङछिरिङको ५० अर्बको साम्राज्य ? यति ठूलो व्यवसाय कस्लाई जाला ? (भिडियो) काठमाडौँ – आङछिरिङ शेर्पाका बारेमा एउटा भनाइ छ- नेपाल घुम्न आउने कुनै पनि विदेशी पर्यटक उनलाई पैसा नतिरी फर्केर जान पाउँदैनन्।
पर्यटन क्षेत्रमा झन्डै ३० वर्ष लामो अनुभवबाट आङछिरिङले आर्जेको प्रतिष्ठा र साम्राज्य यही हो।कुनै समय सोलुखुम्बुको पाङ्बोचेमा पर्यटकका भारी बोकेका र भान्से काम गरेका आङछिरिङको सफलताको कथा कति अद्भूत छ भन्ने उनको नामसँग जोडिएका कम्पनीहरूको सूचीले नै दर्शाउँछ।
विदेशी पर्यटकलाई नेपाल ल्याउनदेखि बास बसाउन, हिमाल चढाउन, पहाडका कुनाकन्दरा घुमाउन, खुवाउन-पियाउन र जहाज तथा हेलिकप्टरमा उडाउनसमेत उनका कम्पनीहरूले उल्लेख्य हिस्सा ओगट्छन्। पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका सानाठूला सबै सेवा उपलब्ध गराउने पूर्वाधार खडा गरेर आङछिरिङले आफ्नो एकल प्रणाली स्थापित गरेका छन्। हेरौ यो भिडियो –